Naxwejiidid | HIGIL
Idiris M. Cali / Maqaal
Posted on Axad, Maajo 6, 2012 by Jidhidhico	Faallo u dhaaf
Mar aan sii fogayn ayaan qoray in uu maansayahanku jabin karo qodobbo cayiman oo naxwaha sugan ka mid ah; tan waxa aan uga gol lahaa in aan aragtiyeeyo sida uu maansayahanku u jiido, oo u sii kobciyo, naxwaha afkiisa. Caddaynta runnimada aragtidan iyada ah ayaa ku xidhan hal tusaale ah, oo aan soo tebin doono. Kolka hore, aynu tusaalayaal Qur’aanka ku jira eegno.
Tusmada 105aad ee Deerka Shucuraa waxa ay leedahay, kadthabat qawmu Nuuxinil mursaliin, oo macnaheedu yahay, beeniye darkii Nuux ergooyinkii. Macnuhu waxa uu daaranyahay: Darkii nebi Nuux (cs) waxa ay beeniyeen ergooyinkii (rasuulladii). Darkaas nebi Nuux (cs) imisa rusul ayaa loo diray? Waa mid qudha, waana nebi Nuux (cs). Qofka aan si fogtoon u darsin Qur’aanka—iyo daraasadaha ay culimada Islaamku ka suugaansadeen Qur’aanka—waxa uu is oran karaa tusmadaas iyo kuwo kale ee la midka ah oo Qur’aanka ku jira naxwe ahaan ma saxtoodsana! Hasayeeshee, macnaha iyo murtida ay tusmooyinkani xambaarsanyihiin ayaa naxwaha sugan ka jiiday bartii laga filayey, oo u jiiday heer kore, sida aynu dhugan doonno.
Dhab ahaantii, tusmooyinkani waxa ay gundhig u yihiin qaaciidada ah in darka beeniya ergay ka mid ah ergayaasha Eebbe ay wada beeninayaan ergayaashaas Eebbe soo diray oo dhan. Sababta oo ah, ergadu waxa ay ka simanyihiin farriinta ah in Eebbe keligii la caabudo. Haddii uu ruux diido mid-ahaansha Eebbe sida uu nebi Muxammad u soo tebshay, haddana uu ruuxani aaminsanaado mid-ahaanshaha Eebbe sida uu nebi Muuse u soo tebshay, waxa wareer ka taaganyahay sida uu ruuxani farriin mid ah, oo ah rumaysnaanta mid-ahaanshaha Eebbe, isku mar u rumayn karo una beenin karo! Naxwaha, oo runtii ka dabqaata maangalyada, ayaaba diiday in ruuxani saxsanaado. Sidaas daraaddeed, darkii Nuux (cs) hadday nebi Nuux (cs) ku beeniyeen farriintaas midda ah, ergadii ka dambaysay oo dhan farriintaas midda ah oo ay dadka soo gaarsiiyeen na waa ay beeniyeen! Waa maangalyo murtiyeysan, kuna timid nawxejiidid. Waanan u riyaaqi karnaa eegga sababta ay tusmadu u xamishay naxwejiididda.
Eebbe, Isaga ayaa af walba abuuray. Naxwaha af kastana halka uu ku simanyahay Isaga ayaa og. Aragnayna in naxwejiididdu murtida ku daba jirtaa lagamamaarnaan tahay. Haddaba, uma bannaana naxwiilaha in uu seeso halka uu naxwuhu ku simanyahay, oo waxa dhici karta in uu naxwuhu is ka geddiyo, amma ba ka sikado, barta uu aankan ku suganahay qarniyaal badan dabadeed. Hasayeeshee, naxwiiluhu waa uu darsi karaa heerka uu naxwuhu marayo iyo waxa ay tahay shaqada uu afka ka qabto. Sida ay ila tahay, naxwuhu isaga oo dhammays tiran ayuu jiraa; naxwiilaha, oo kaashanaya maansayahayanka, qoraayada, amma ba dhiganaha Qur’aanka iyo suugaan kale ba, ayaa soo shaac bixin kara rugaha qarsoon ee naxwaha—rugahan oo ay naxwejiididdu ka mid tahay.
Naxwejiididdu waxa ay balaadhisaa naxwaha, oo xayndaabkiisa ayey fidisaa. Af Soomaaligu naxwejiidid waa uu leeyahay, sida uu afka Carabigu u yeeshay. Tusaale ahaan, meeriska: (1) Dhago ma leh dadkaad Jaamacow, wax u dhigaysaane. Waxa naxwe ahaan qumman in loo dhigo meeriskaas sidan: (2) Dhago ma leh dadkaad Jaamacow, wax u dhigaysaaye. Hasayeeshee, macnaha uu meeriska (1) sito ayaa ka balaadhan kan (2). Jaamucu waa Jaamac Kediye, maansoyahan dadka baraarujin og. Kelidiis Jaamac dadka ma baraarujee, waxa kaloo iyana jira kumaankun halabuur oo dadka baraarujiya. Haddaba, Jaamaca meeriska (1) waxa uu matalaa halabuurkaas Soomaaliyeed, halka uu Jaamaca meeriska (2) matalo isaga oo qudha. Si aad u gaadho macnaha meeriska (1), waa inaad naxwaha kala jiiddo, illaa inta maangalyadu ka ogoshahay.
Gabagabayntii, waa in aan u riyaaqnaa maansayahanka sida ay meerisyada maansadeeda uga tan bataan u hoggaansamida naxwaha sugan ee afka. Naxwaha afka oo dhami sugan iyo in aan wali sugmin ba waa leeyahay, waana kol ba iyo sida lagu soo xereeyo, oo naxwejiididdu shaqadeedu tahay.
Previous post ← Darajiyo Xil Yaa Mudan?
Next post Dadkaan Dhawaaqayaa: Qarshe →